Creamy မုန်လာဥသုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မြေပဲထောပတ် Krispie ချောကလက်နှင့်ရယူထားသော
အေးခဲနေသော hash browns နှင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
ဝက်ပေါင်ခြောက် hock ဂိုးသွင်းဖို့ဘယ်လို
မုန်လာဥသုပ် အရသာတောက်ပသောအရသာရှိခြင်း၊ အရသာကောင်းခြင်းနှင့်အတူအရသာရှိသည့်ဘေးထွက်ပန်းကန်ဖြစ်သည်။ ဖျက်စီးထားသောမုန်လာဥနီ၊ နာနတ်သီးနှင့်စပျစ်သီးပျဉ်များကိုရိုးရှင်းသော creamy dressing တစ်ခုထဲသို့ပစ်ချလိုက်သည်။
ဂန္မှဤလတ်ဆတ်သောအခြားရွေးချယ်စရာ coleslaw စာရွက် ရိုးရှင်းတဲ့ပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစတိုင်လ်သို့ပြန်လာသည်။ သင်ဤမုန္လာဥနီသုပ်စာရွက်ကိုစမ်းကြည့်ပြီးသည်နှင့်သင်ဘာကြောင့်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
မုန်လာဥနီကိုပန်းကန်ထဲ၌အဓိကကျသောအရာအဖြစ်မကြာခဏသတိမမူမိကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်မဖြစ်သင့်ပါ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုအသုံးပြု! မှ glazed မုန်လာဥ ရန် လှော် ၎င်းတို့သည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစျေးသိပ်မကြီးသော၊ ရရှိနိုင်သည့်အပြင်သူတို့၏ချိုမြိန်မှုသို့မဟုတ်အကြပ်အတည်းကိုမပျောက်စေဘဲသင်၏ရေခဲသေတ္တာ၏အပိုင်းပိုင်း၌နှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဒီဟာကရိုးရိုးလေးပဲ။ အထူးသဖြင့်သင့်မှာအစားအစာထုတ်လုပ်သူရှိတယ်ဆိုရင်။ သင့်တွင်အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်မရှိလျှင်ဒိန်ခဲ grater သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
မုန်လာဥသုပ်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများစပျစ်သီးပျဉ်, ချဉ်သောမုန့်, ​​mayonnaise, နာနတ်သီးနှင့်ရှလကာရည်တစ်အရိပ်အမြွက်ပါဝင်သည်။ ငါတို့ကစည်သွပ်ဗူးကိုနာနတ်သီးကိုသုံးတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့လက်မှာလတ်ဆတ်နေရင်ထုပြီးခုတ်ပြီးသုံးပါ။ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းပြီးထူးခြားဆန်းပြားသောအပြောင်းအလဲသည်မော်ရိုကိုမုန်လာဥအသုပ်ဖြစ်သည်။ ဒီဗားရှင်းမှာတော့မင်းဟာသံပုရာဖျော်ရည်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်၊
ဒါကဓါးတစ်ခုတည်းလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘယ်မှာတ ဦး တည်းစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကျိန်းသေမုန်လာဥရုံညာဘက်ပျော့ texture ရဖို့အချို့သောမျိုး၏ဖျက်စီးဓါးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဖျက်စီးသောဓါးသွားများကိုတွေ့ရသည် အနုပညာ , box graters နှင့်အစားအစာထုတ်လုပ်သူ။
အစားအစာထုတ်လုပ်သူ : ထိပ်များကို ဖြတ်၍ မုန်လာဥနီတစ်လုံးစီကိုအဆုံးသတ်ပြီး ၂-၃ လက်မအပိုင်းပိုင်းခွဲပါ။ သင်၏အစားအစာပရိုဆက်ဆာကိုဖျက်စီးသည်အထိဖျက်စီးသောဓါးနှင့်သွေးခုန်နှုန်းဖြင့်တပ်ဆင်ပါ။
Box ကို Grater သို့မဟုတ် Mandolin : ရိုးရှင်းစွာဆေးကြောပြီးလျှင်၊ အခွံနှင့်မုန်လာဥနီများကိုဖြတ်ပစ်ပါ။ သို့သော်အပိုင်းပိုင်းမခွဲပါနှင့်။ ၄ င်းတို့သည်ကျန်းမာနေစဉ်၎င်းကိုဖျက်စီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ box graters နှင့် mandolins နှစ်ခုကိုဖျက်စီးအရွယ်အစားရှိသည်။ သင်ပိုကြီးတဲ့တစ်ခုသုံးချင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းသောဓါးသည်မုန်လာဥနီကိုရှုပ်ထွေးသည့်ပျော့ဖတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေသည်။ ကောင်းမွန်သောလက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ပြင်ဆင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဘာထင်လဲ သငျသညျကုန်ကြမ်းဖျက်စီးမုန်လာဥအေးခဲနိုင်ပါတယ်! အသုံးမပြုတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုပလပ်စတစ်ရေခဲသေတ္တာအိတ်ထဲထည့်ပြီး ၄ လအထိကြာအောင်ထားပါ။ ဖျက်စီးထားသောမုန်လာဥနီကိုဟင်းချိုများတွင်ထည့်ပါ။ ကြက်သားကြော် casseroles နှင့်ပိုပြီး!
စပျစ်သီးသုပ် - ကလေးဖော်ရွေ
Ambrosia သုပ် - ငါ့အမေရဲ့စာရွက်
သန်းကြွယ်သူဌေး Cranberry သုပ် - potlucks အဘို့ကြီးသော!
Waldorf သုပ် - ဂန္ထဝင်
Watergate အသုပ် - ငါ့သမီးရဲ့အကြိုက်ဆုံး
ဖျက်စီးထားတဲ့မုန်လာဥနီနဲ့စပျစ်သီးစေ့အသုပ်ဟာချိုမြိန်ပြီးအရသာရှိတဲ့ဘေးထွက်ဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအမဲသားပါ ၀ င်တဲ့အရည်အသွေးတွေကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ အရည်ရွှမ်းသော၊ ဝက်သားကင်ဆွဲထုတ် , အလှည့်ကျသောကြက်သားသို့မဟုတ် ဝက်ပေါင်ခြောက် ။
ပြင်ဆင်ချိန်၁၀ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson သငျသညျတောက်ပသောအရသာနှင့်အစာအာဟာရနှင့်အတူစိမ်းလန်းသောဘေးထွက်ပန်းကန်ကိုရှာဖွေလျှင်, သင်ဤမုန္လာဥနီသုပ်ကိုချစ်လိမ့်မယ်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၄ ခွက် ဖျက်စီးမုန်လာဥ ၆ ခုလောက်ကြီးတယ်
▢⅓ ခွက် ဒိန်ချဥ်
▢၁ ဇွန်း ရှလကာရည်
▢၁ ခွက် စပျစ်သီးပျဉ်
▢၈ အောင်စ ကြေမွနာနတ်သီး ပေါ့ပေါ့ညှစ်
သော့ချက်စာလုံးမုန်လာဥနီသုပ်, Cole slaw, slaw သင်တန်းအသုပ်, Side Dish ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။